उपेन्द्रले पोल खोले— कांग्रेस, माओवादी, राजपा र सीके राउतको सम्बन्ध यस्तो छ
उपेन्द्रको रुपान्तरण !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । ‘कांग्रेस र माओवादीले २ नम्बर प्रदेशलाई धेरै अगाडि देखि नै निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग गर्ने योजना बनाएकै थिए, कुरा गर्दाखेरी त्यही कुरा भन्थे ।
२ नम्बर प्रदेशको चुनाव त्यतिकै सर्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन । २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर के संकेत दिन खोजेको राज्यले ? मधेस बेग्लै हो, बाँकी नेपाल बेग्लै हो भन्ने मनोविज्ञान जन्म दिने काम यसले गरेको छ ।
चुनाव सार्न बाह्य कुन शक्तिले दवाव दियो त सम्बन्धित ब्यक्तिले वताउँदै जालान् तर, सरकार एक्लैले यत्तिको आँट गर्न सक्दैनथ्यो । कहीँ न कहीँ इन्फुलेन्स छ ।
राष्ट्रिय एकतामा यस्तो मनोवैज्ञानिक विभाजनको विजारोपण सत्तामा सहभागि पार्टीले गरे । त्यसमा को सहभागि छ ओपेन सेक्रेट छ ।
अलगाववादी सीके राउत र महन्थजीबीच वार्ता भएको कुरा आएको छ । के मुद्दामा छलफल भयो, के सहमति भयो त्यो कुरा बाहिर आएको छैन ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको यसैबेला वताउनु भएको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्र संकटतर्फ धकेलिंदैछ । यसै बेला २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर त्यसलाई बल प्रदान गरिएको छ ।
उपेन्द्र यादवको सो अन्तरवार्ता धेरै त्यस्ता बुद्धिजीवीले हेर्नै पाएनन् वा हेरेर पनि कांग्रेस माओवादीले बोकेको भारतीय मिसनको पोल खोलिदिएकामा मुर्मुरिए मात्रै, वा केही थान लेखकले ट्वीटरमा उपेन्द्र यादवलाई सत्य उद्घाटन गरेवापत सरापिरहेका छन्
देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सपथ खाएको ब्यक्तिले, राष्ट्रहितमा काम गर्छु भनेर सपथ खाएको नेताले यसलाई बल पुर्याउन मिल्छ ?’
कान्तिपुर टेलिभजनको फायरसाइड कार्यक्रमका लागि भुषण दाहाललाई हालै दिएको अन्तरवार्तामा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ब्यक्त गरेको गम्भीर र सनसनीपूर्ण तथ्य यदि कुनै पहाडे मुलको नेताले भनेको भए यतिबेला मुलधारमा स्थापित केही ‘लेखक’हरुले ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’को ‘कोनेटेशन’मा केही थान आर्टिकल लेखिसक्ने थिए ।
देशमा चालु सत्ता गठबन्धन, संवैधानिक ब्यवस्थालाई डिफ्युज गर्न जारी राजपा आन्दोलनलाई आन्तरिक राजनीतिक कोर्ष र मधेसका जनताको असन्तुष्टिको परिभाषा दिन उनीहरुले निकै बल लगाउने थिए ।
तर, उपेन्द्र यादवको सो अन्तरवार्ता धेरै त्यस्ता बुद्धिजीवीले हेर्नै पाएनन् वा हेरेर पनि कांग्रेस माओवादीले बोकेको भारतीय मिसनको पोल खोलिदिएकामा मुर्मुरिए मात्रै, वा केही थान लेखकले ट्वीटरमा उपेन्द्र यादवलाई सत्य उद्घाटन गरेवापत सरापिरहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्न राजपा नाम गरेको दललाई जसरी अगाडि सारियो र सरकारकै बलमा चुनाव स्थगित गरियो त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा उपेन्द्र यादवले भनेजस्तै गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ ।
जुन संकट आमन्त्रणको नेपथ्यमा सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, राजपा र अलगाववादी अभियन्ता सीके राउतसम्म एकै ठाउँ छन् भन्ने रहस्य उपेन्द्र यादवकै भनाईले उद्घाटित गरेको छ ।
भारतले नेपाल विरुद्ध एउटै लगाममा नारेका कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चामा आएको विभाजन र यसले उजागर गरेका रहस्यहरुसँग उनीहरु बेचैन भएका हुन् ? जस्ता प्रश्न हिजो मधेसी मोर्चा र कांग्रेस–माओवादी सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर सर्वसाधारणले गर्थे आज तिनै प्रश्न उपेन्द्र यादवले गरिदिएका छन्
स्थानीय तहको चुनावमा तराई केन्द्रित दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र अर्काे दल उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम पनि सामेल छन् ।
निर्वाचनमा तराई मधेसका जनता उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागि छन् । चुनाव रोकिएको प्रदेश २ का जनता चुनाव रोकिएकामा आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
तर, काठमाडौंबाट ट्वीटर ह्याण्डल चलाउने ‘ब्यवसायिक लेखक’को एउटा जमात यसअघि जसरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई गाली गथ्र्याे त्यसैगरी उपेन्द्र यादवका विरुद्ध उत्रिएको देखिन्छ ।
चुनावमा भाग लिनुलाई उपेन्द्र यादवको दोषका रुपमा अथ्र्याउँदै उनीहरुले के दलिल गर्न खोजेका छन् त्यो पनि ओपन सेक्रेट नै छ ।
संघीय समाजवादी फोरम एक महिना अघिसम्म राजपासँगैको मोर्चामा आन्दोलन गरेको दल हो ।
तर, अहिले चुनावमा भाग लिने निर्णयपछि त्यस पार्टीका अध्यक्ष यादवले जेजति खुलासा गर्दै आएका छन् त्यसले उनमा वैचारिक रुपान्तरण आएको देख्न सकिन्छ ।
उनको पनि अर्काे कुनै गुप्त उद्धेश्य वा छैन अथवा उनी यो विचारधारामा कति समय अडिन्छन् बेग्लै कुरा हो । तर, उनले अहिले अगाडि सारेका विषयले ‘मधेसवाद’का नाममा विगत तीन वर्षयता जे जे भयो त्यो कुनै राजनीतिक विचारमा आधारित अभियान थिएन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
मधेस भूगोल हो, भूगोलवाद हुँदैन । मैले राजनीति शास्त्रमा माक्र्सवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, पढ्या छु । मैले मधेसवाद, काठमाडौंवाद पढ्या छैन । काठमाडौंवाद, विराटनगरवाद, राजविराजवाद, बीरगञ्जवाद, यस्तो हुन्छ र कहीँ दुनियाँमा ? हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी हौं हाम्रो दिशा त्यो हो
यादवले भनेका छन्– मधेस भूगोल हो, भूगोलवाद हुँदैन । मैले राजनीति शास्त्रमा माक्र्सवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, पढ्या छु । मैले मधेसवाद, काठमाडौंवाद पढ्या छैन । काठमाडौंवाद, विराटनगरवाद, राजविराजवाद, बीरगञ्जवाद, यस्तो हुन्छ र कहीँ दुनियाँमा ? हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी हौं हाम्रो दिशा त्यो हो ।’
हो, यही सत्य कुरा भन्दा हो यहाँ चल्तीका अभियानवादीहरुले एउटा निश्चित दलमाथि मधेस विरोधी भनी प्रहार गरेका । मूलधारका सञ्चार माध्यमले त ‘मधेसवाद’को कोनोटेशन नै तयार गरे र नेपालमाथि भारतको कुत्सित प्रहारका विरुद्ध उभिने नेपालीलाई मधेस विरोधी विशेषण भिराए ।
मधेसी जनता र मधेसी दल अलग हुन् भन्ने तिनले कहिल्यै स्थापित हुन दिएनन् । मधेसीले अविश्वास गरेका राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर लगायतलाई सधैं मधेसी जनताका प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वाध्यतामा उनीहरुरुले खडा गरिदिए ।
त्यसमाथि भारतले नै बनाइदिएको सत्ता गठबन्धन र त्यही गठबन्धनको एउटा पक्षलाई सत्तामै रहेर विद्रोहीको सेवा लिने अवसर यहाँ जुट्यो ।
गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कसले ढालेको थियो रु त्यसपछिको सरकार कसले बनाएको थियो ? अहिले सत्ताको केन्द्र र ‘विद्रोह’को केन्द्रमा किन एउटै पक्ष छ भन्ने कुराको जवाफ पनि सायद उपेन्द्रले दिएका छन् ।
अझै पनि हाम्रो मुलधारको मिडिया चरित्र के छ भने सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र राजपा फरक फरक उद्धेश्यमा चलेका शक्ति हुन् भनेरै चित्रण गरिरहेका छन् ।
तर, आन्दोलनका नाममा अतिवादको अभ्यास गर्ने, बिखण्डनकारीसँग सहकार्य गरी देशमाथि प्रहार गर्ने राजपा र राजपालाई राजनीतिक दर्जा दिएर संरक्षण गर्ने कांग्रेस माओवादी सरकारका छद्म द्वन्द्व पाठकहरुलाई आम सञ्चारले पढाइरह्यो । यी दुवै पक्ष एउटै केन्द्र वरिपरी घुम्ने उपग्रह हुन् भन्ने कहिल्यै उजागर हुन सकेन ।
कांग्रेस, माओवादीको सत्ता र राजपाले फरक फरक ठाउँमा उभिएर जे जे गरेका छन् उनीहरुले सल्लाहमै गरेका छन् भन्ने प्रमाणका लागि उपेन्द्र यादवको यो भनाई काफी छ
उपेन्द्र यादवले त्यसै अन्तरवार्तामा भनेका छन्– उहाँहरु (राजपा) कसको विरुद्ध लड्दै हुनुहुन्छ ? विद्रोह वा आन्दोलन राज्यका विरुद्ध हुनु पर्छ ।
उहाँहरु आफैं राज्य बनाउनुहुन्छ, सरकार बनाउनुहुन्छ । सरकार आफैंले बनाएर समाजवादी फोरमका विरुद्ध, राजनीतिक दलका साइनबोर्ड र कार्यक्रममा प्रहार गर्नुहुन्छ ।
आज राजपाको प्रहार उपेन्द्र यादवको पार्टीका कार्यक्रम पनि परेकाले उपेन्द्रले यसलाई ब्यक्त गरेका हुन् । उनी मधेसी समुदायकै भएकाले उनको बोलीलाई पहाडी र मधेसीको रंग दिन मिलेन ।
तर, हिजो त्यही समस्या एमालेले भोग्यो । सत्ता संरक्षणको मधेसी मोर्चाले सप्तरीमा एमालेका कार्यक्रममा हिंसात्मक आक्रमण गरेर एमालेलाई नै हिंसाको जिम्मेवार बनाउन खोजिएको थियो ।
सत्तापक्ष नै थियो मधेसी मोर्चा तर, राज्य पक्षसँग मिलेर एउटा दलको कार्यक्रममा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने फासिवादी काममा छुट उसले पाएको थियो ।
सजिलैसँग त्यसलाई पहाडी र मधेसीको रंग दिएर फासिवादी हिंसाले पीडित एमालेलाई नै उल्टै दोषी देखाउने ब्यवसायिक लेखक यही दुनियाँमा थिए ।
अहिले उपेन्द्र यादवको वैचारिक रुपान्तरण क्षणिक नै किन नहोस्, उनले सत्य उदघाटित गरेका छन् । राजपा र अहिलेको सरकार लगाम, उद्धेश्य र गन्तब्य कुनै पनि हिसावले भिन्न शक्ति होइनन् ।
अन्तरवार्तामा उपेन्द्र यादवले खुलासा गरेका छन्– ‘अस्ती सुनेको थिएँ, बिहानै उठ्ने वितिक्कै राजपाको नेता प्रधानमन्त्रीकहाँ जान्छ र म आज फलानो ठाउँमा आन्दोलन गर्न जान्छु भन्ने सल्लाह त्यहीँ गर्छ । अनि आन्दोलन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि फोरम नेपाल र राजनीतिक दलका कार्यक्रममा ढुंगामुढा गर्छ । यो आन्दोलनको विचलन हो ।’
कांग्रेस, माओवादीको सत्ता र राजपाले फरक फरक ठाउँमा उभिएर जे जे गरेका छन् उनीहरुले सल्लाहमै गरेका छन् भन्ने प्रमाणका लागि उपेन्द्र यादवको यो भनाई काफी छ ।
हिजो सप्तरीमा एमालेको कार्यक्रममाथि हिंसात्मक प्रहार गरेर मान्छे मार्दा पनि मधेसी मोर्चा र सरकारले सल्लाहमै गरेका थिए भन्ने आधार यसले दिन्छ ।
त्यसबेलाका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सप्तरी घटनाअघि एमालेलाई कार्यक्रम गर्न नदिन गरेको सार्वजनिक आव्हान त्यसबेला सुनिएकै थियो ।
प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भोट हाल्न हुने । ठूल्ठूला नेताहरु त्यहाँ लाइन लाग्नु भाथ्यो । शेरबहादुरलाई, सुशीललाई र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चुनावमा भाग लिन हुने । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छु भन्दा खवर्दार भन्ने ? यो दुई खालको चरित्र भएन ?
राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमबीच कार्यदिशाका हिसावले अहिले बाटो छुट्टिएको देखिएको छ । भलै यो अल्पकालीन पनि हुन सक्छ । तर जतिबेला उनीहरुको बाटो छुट्टियो त्यतिबेला एकथरी लेखक विश्लेषकहरुमा भने बेचेनी पैदा भएको छ ।
किनभने भारतले नेपाल विरुद्ध एउटै लगाममा नारेका कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चामा आएको विभाजन र यसले उजागर गरेका रहस्यहरुसँग उनीहरु बेचैन भएका हुन् ? जस्ता प्रश्न हिजो मधेसी मोर्चा र कांग्रेस–माओवादी सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर सर्वसाधारणले गर्थे आज तिनै प्रश्न उपेन्द्र यादवले गरिदिएका छन् ।
अन्तरवार्तामा उपेन्द्र यादवले भनेका छन्– ‘प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भोट हाल्न हुने । ठूल्ठूला नेताहरु त्यहाँ लाइन लाग्नु भाथ्यो । शेरबहादुरलाई, सुशीललाई र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चुनावमा भाग लिन हुने ।
राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमबीच कार्यदिशाका हिसावले अहिले बाटो छुट्टिएको देखिएको छ । भलै यो अल्पकालीन पनि हुन सक्छ । तर जतिबेला उनीहरुको बाटो छुट्टियो त्यतिबेला एकथरी लेखक विश्लेषकहरुमा भने बेचेनी पैदा भएको छ
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छु भन्दा खवर्दार भन्ने ? यो दुई खालको चरित्र भएन ? सत्तामा चाहीँ आफू जाने तर, जनतालाई चाहिँ निर्वाचनमा भाग नलेउ भन्ने ? अनि जनताले त्यो मुद्दालाई तिरस्कार गरिदिए ।’
क्षणिक नै भए पनि उपेन्द्र यादवको यो रुपान्तरण सकारात्मक र सह्रानायोग्य छ, नाकाबन्दीका बेला भारतीय सीमानामा धर्ना नै बस्न जाने भेषधारी लेखक बुद्धिजीवीलाई यसले पसिना छुटाए पनि ।
सोमबार, ४ असार, ०७४